Ndị nwere ọgụgụ isi Key Management System na orylọ ọrụ - China Intelligent Key Management System Manufacturers
Usoro ọgụgụ isi Key Management
Ọgụgụ isi Key Management System keylongest
Ọgụgụ isi Key management System A-180E With USB Co ...
H2000 Network Electronic igodo nsuso Cabinet
H3000 gam akporo njikwa ngwaọrụ nchekwa Kabinet
i-keybox-48 Hot Sales Security Key njide Cabinet
Office & Hotel Self Service Igodo Machine na Face ID na mkpisiaka
Advanced ihu ude na ndụ ndu akara mkpisiaka ude Nyocha iji nye gị otu na abụọ ikike Nyocha
Landwell nwere ọgụgụ isi isi igbe nchekwa nchebe usoro ụlọ ọrụ
Ezubere Landewell Intelligent Key Management Cabinet na Lockers ka emepụtara iji debe igodo, ngwaọrụ, ma ọ bụ akụrụngwa dị mma, ma jikwaa ha n'ụzọ nlekọta na ikike. Ndị a smart cabinets jikọtara isi cabinets na mkpọchi ọnụ. Enwere ike imeghe ọkwa ndị ahụ naanị site na kaadị RFID dị nso (transponder), ma ọ bụ / yana koodu PIN, ma ọ bụ / yana njirimara mkpisiaka. Ndị ọrụ nwere ike imeghe naanị ndị ahụ mkpọ ma weghachite naanị igodo ndị enyere ha ikike.
• Teknụzụ RFID a maara nke ọma na-eme ka usoro ahụ bụrụ ihe akpaka
• Igwe PMMA ma ọ bụ ọnụ ụzọ igwe anaghị agba nchara iji mee ka igodo dị nchebe
• Naanị ndị ọrụ ikike nwere ike ịnweta igodo e kenyere n'oge ụfọdụ
• Igodo dị n'okpuru njikwa site na ngwaike na ngwanrọ na ezigbo oge
• Integrated na ọtụtụ ohere akara usoro
Landewell nwere ọgụgụ isi isi management usoro adopts oge a RFID technology-enyere gị aka hazie kwa ụbọchị igodo na akpọrọ ihe amamihe.
• Mara nke ọma RFID technology, na-eme ka usoro n'ụzọ zuru ezu akpaka
• Ọnụ ụzọ PMMA ma ọ bụ ọnụ ụzọ igwe anaghị agba nchara iji mee ka igodo dị nchebe
• Naanị ndị ọrụ ikike nwere ike ịnweta igodo e kenyere na oge ụfọdụ
• Igodo dị n'okpuru njikwa site na ngwaike na ngwanrọ na ngwanrọ
H2000 nwere ike hụ na nchekwa nke akụ onye ọrụ, debe mkpịsị ugodi ebe kachasị ha mkpa, ma bulie ha n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla
enweghị ike iji ya na-enweghị ikike ma nwee ike ikpebi onye jiri akụ ahụ na oge ụfọdụ. Ọ na-ebelata njikwa njikwa ma nye njikwa dị mma maka usoro dị mkpa.
Intelligent Key management System A-180E Na USB njikọ
A-180E na-enye nzukọ zuru oke nke igodo 18 na obere ọnụ ahịa maka ụlọ ọrụ gị. Naanị ndị ọrụ ikike nwere ịnweta igodo ya na ntọala ikike. Kedu ihe ọzọ, ndị ọrụ ikikere na-egosipụta onwe ha (n'ime oge ụfọdụ) site na kaadị onye ọrụ, paswọọdụ na mkpịsị aka na njedebe. A ga-elele nkọwa niile dịka ịnara na nloghachi nke igodo kpamkpam na akụkọ dị iche iche.
i-keybox-8 Obere Igbe na Sistem Njikwa Ma Igodo
Landewell CE akwụkwọ Igodo njikwa njikwa kabinet jiri teknụzụ RFID mee ka igodo gị na akụ gị dị nchebe maka ojiji gị, edere ozi ahụ maka onye ọrụ na akụ ọ bụla, ma mepụta akụkọ maka akụ bara uru.
i-keybox-16 eluigwe na ala eletriki kabinet igodo
Landewell Commerce Key Management System Box adopts na RFID technology mfe iji. dezie ojiji nke igodo ahụ (aha, aha isi, oge nloghachi, wdg) debe igodo ahụ ebe ịchọrọ ha, ma bulie ha n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
• PMMA iko ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara ụzọ mee ka igodo dị nchebe
• Igodo na-achịkwa site na ngwaike na ngwanrọ na ngwanrọ
• Ejikọtara ya na ọtụtụ usoro nchịkwa njikwa
Landewell Wall Mounted Key Safe Management System Box nwere ike hụ na nchekwa nke akụ onye ọrụ, enweghị ike iji ya na-enweghị ikike. Edere arụmọrụ niile na onye ọrụ were ọrụ maka nchekwa akụ.
i-keybox-64 Kasị Secure Key mkpọchi kabinet
Landewell Key Cabinet Na Digital Management Sistem si mfe echekwa nchekwa nhọrọ ka enterprise-larịị akara nke ọnụ ma ọ bụ mwute ngwaọrụ, ọ na-enye ihe kensinammuo na ike ụzọ jikwaa, soro ma na-akọ ojiji nke kasị mkpa akụ.
m-keybox-96 Electronic Key Nchekwa Cabinet
Landewell Key Cabinet Na Nchikota Management System bụ salable na ahaziri iji kwado ọ bụla ngwa. Ọ na-eji usoro ịsụ ụzọ iji jikwaa akụkụ kachasị mkpa nke nzukọ ọ bụla.
i-keybox-100 igodo dijitalụ nchekwa kabinet
Landewell Electronic Key Control Cabinet nwere ike soro ọ bụla isi ọnọdụ kpọmkwem nke mere na igodo niile nwere ike
jikwaa amamihe. Ọ bụ n'ezie ezigbo ụzọ iji nyere gị aka idozi nsogbu njikwa isi. belata ihe ize ndụ na njikwa njikwa, melite arụmọrụ ọrụ.
m-keybox-200 nnukwu nchekwa nchekwa kabinet
Landewell nwere ọgụgụ isi isi management usoro adopts elu RFID technology-enyere gị aka hazie kwa ụbọchị igodo na ihe bara uru akụ.
office dealership isi nsuso usoro keylongest
keylongest bụ elu nkwụnye na-play isi njikwa usoro.
Teknụzụ RFID nke etinyere ya jikọtara ya na sistemụ gam akporo, na-ejikọ igodo 26 yana obere nhazi, na-eme ka ọ dabara adaba maka ụlọ ọrụ obere na ọkara
a na-ejikwa keylongest jikwaa site na ihuenyo mmetụ gam akporo na ngwanrọ arụnyere, igodo ndị echekwara n'ime oghere nwere ike ịnweta naanị site na ndị ọrụ ikikere na usoro akọwapụtara nke enyere site na ngwanrọ.
Igbe maka Igodo Igodo, Nnukwu Stolọ Nche Nchekwa, Nchịkọta Nchịkọta Obere Igbe na Igodo, Mkpọchi Key Cabinet, Igodo Isi Nchịkwa, Ikwado Key Box,